मेरा बिम्बहरु..... Pages
म र मेरो
जानकारी Monday, March 13, 2017
वस्तु होइन !
एकल निर्णयको चीतामा इच्छा
बाध्य छैन !
पुरा गरेको कर्तब्यहरुको दम्भ
संग त्यसको ब्याज उठाउने अधिकार
तिमीलाई छैन !
स्वतन्त्र छु आफ्नो
इच्छाको मालिक, आफ्नो
भविष्यको सिर्जना मेरो
स्वबिबेकले गर्दछ! तिम्रो
र तिमी जस्तै अरुको बन्द
कोठा भित्र गरिएको निर्णयले होइन !
पुस्तौनी इज्जतको खातिर पुरातन
रितिरिवाजको आडमा कथित
नियतिलाई दोष दिंदै मेरो
भबिष्य तर्फ ढकेल्दै
रुखो हातहरुमा आँखा
चिम्लेर सुम्पिन तिमीलाई
लज्जाबोध हुँदैन ?
सङ्कोच लाग्दैन ?
काँप्दैनन् तिम्रा हातहरु ?
तिम्रा आँखा सम्पत्ति खोज्छ ?
खुशी खोज्दैन ?
पिजंडामा पंक्षी हाँसेको
देखेको छौ र कतै ?
स्वच्छन्द जीवन चाहन्छु चाहन्छु
खुला आकाश मुनी रम्न मेरो
भविष्यको निर्णय मेरो
मन मस्तिष्कले गरोस तिम्रो
एक लहडले होइन !
सर्तहरुमा बनुन !
यो अवसर दिन ?
अधिकार दिन ?
उघारेर हेर म पनि मानव हुँ !
छुट्टै अस्तित्व छ ! मेरो
पनि आफ्नै आवाज छ !
गर्दै, लिलाम हुने वस्तु
होइन म खबरदार !! २०७३/१०/४
बिमोचन घिमिरे Posted by
Reactions: Saturday, February 18, 2017
Dear,तिमी (कसैलाई वास्तविक लागेमा, संयोग मात्र हुनेछ ।।)
एक्कासि बाटो काट्न आउने केहि सुमधुर दृश्यहरु, कहिलेकाहीं दृश्यहरुमा ओहोरदोहोर
गर्ने शब्दहरु र कतैकतै पोखिने मनका केहि ठट्यौलि, केहि गहिरो भावनाहरुका शब्द
देख्दा, लाग्छ तिमी ठिकै छौ जिन्दगी जिउनेक्रममा ! न राम्रो न नराम्रो, ठिकै !
जिन्दगि यसरी चल्दै गर्दा नि रमाइलो नै हुन्छ होला, म त्यति ठम्याउन सक्ने
अवस्थामा आज छैन । जे होस्, छरिने ति मुस्कानहरुलाई संगाल्न पाउँदा म पनि खुशी नभई
रहन सक्ने अवस्था छैन, म खुशी नै छु, खुशी देख्न चाहेकाहरु खुशी हुँदा ! तर चिन्ता
यति हो, खुशी देखिएका ओठ र आँखाहरु बीच उही संदेश संचार होस्, एकले अर्काको भन्दा
भिन्न संदेश प्रवाह नगरुन !!
भयो शब्दहरुले एकअर्काको चौघेरा नाघेर एक अर्काको आँगनमा नखेलेको । त्यसैले अचेल
अर्थ र सन्दर्भहरु बुझ्न पनि निकै रस्साकस्सी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, दिमाग धेरै
सोच्छ , न सोच भन्दा भन्दै ! आज सोचें कसैले नपढ्ने एउटा चिठी लेखौं अनि आफैले
पढौं हरेक शब्दहरु ! बस शब्दहरु थुनिनु भन्दा पोखिएकै राम्रो, होइन त ? प्रश्न नि
कसलाई सोध्नु छ र ? जब उत्तर दिने म आफै छु ! खैर ! लेख्नु त छंदै छ, म लेख्दै छु
! आफुले पाएको, नेपालीमा भन्दा "लेखक" र अंग्रेजीमा भन्दा
"राइटर"को उपाधि बचाइराख्न र त्यो भित्र गाँसिएको भावनाहरुलाई संगाल्न
पनि म लेखिरहन्छु ! आशा गर्छु मेरा कलमहरु नथाकुन, म थाके पनि !!
कुनै बेला शब्दहरु ठोक्किए भने ख्याल गर्नु शब्द
तिनै हुन्, भावना पनि तिनै हुन् , जो हिजो थिए र जो आज पनि बाँचीरहेछन । लेख्दै
गर्दा आज केहि दिनहरु सम्झिन्छु, एउटा, एउटा दिन ! तिम्रो मानसपटलमा ति दिनहरु
खेल्छ, खेल्दैन्न थाहा छैन ! तर आफै संग बोल्दैछु, अनि यसो लाग्छ तिमीलाई ति
दिनहरु ख्याल नहोला, तिम्रो लागि संधै घट्ने घटना मध्ये केहि नौलो "ए! होर !
" भन्ने दिन नै होला , वा कुनै औपचारिक निरन्तरताको एउटा पट्यार लाग्दो दिन !
तर आशा गर्छु, त्यसो नहोस ! यो भन्दा बेसी म अरु केहि भन्ने र बिश्लेष्ण गर्ने पक्षमा
छैन । बारम्बार प्रश्नहरु आफैलाई तेर्साउँछु अनि उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छु,
भेट्टाउँदिन ! किन, कसरी, के कारण ले ? म खोज्छु आज पनि तर दुखसाथ भन्नुपर्छ, म
भेट्टाउँदिन ! Dear,तिमी
म यहि रस्साकस्सि
बीच, बिगत सम्म पुगेर वर्तमानमा धेरै चोटी पच्छारिएको छु ! बिगत-बर्तमानको एउटा
गम्भीर विरोधाभाष संग जुध्न पनि निकै साहस चाहिँदो रहेछ ! कुनै बेला थाहै नदीई
बाँधहरु भत्किँदै भेलहरु उम्किन्छन, तिनलाई जमाई राख्नु पनि एउटा चुनौती नै लाग्छ
! अनि निरन्तर घुमिरहने दिमाग र मनहरुलाई बाँधेर पिजडा भित्र थुन्नु पनि एउटा
अर्को सकसपूर्ण यात्रा हुँदो रहेछ, अनि यी सबैलाई थाम्दै गर्दा भावनाहरुमा उर्लेर
कलम समात्न तम्सिने हातहरु र लेख्न रफ्तार पकड्ने कलमहरुलाई सम्झाउँदै; "आज
होइन, भोली भन्दै" समय टार्न खोज्नु, त्यो दुस्साहस गर्न पनि निकै ठुलो
साहासको खाँचो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म बल्ल बल्ल बुझ्दैछु ! हुन त, जीवन यस्तै
हो; बुझ्दै, सिक्दै, अपनाउंदै अगाडी बढ्ने ! हरेक अनुभव नयाँ नै हुन्छ ! तर अनुभव
संगाल्न भन्दा त्यो अनुभव संगाल्न परेको यथार्थले भने बेसी घचघचाई रहँदो रहेछ, अझ
यी याथार्थहरु आफैमा अन्योलपूर्ण र रहस्यमय भए, चक्रब्युमा फसेको अभिमन्यु जस्तो
जीवनले बाहिर निस्किन कुनै सुरक्षित निकास नपाउँदो रहेछ ! एक्कासि बाटाहरु
बदलिए भने, कुनै कारण बिना यात्राहरु रोक्किए भने, के बुझ्ने ? निष्कर्ष के
निकाल्ने ? अनि बोलिएका भनाई र नबोलिएका वास्तविकता बिचको खाडल कसरी पुर्ने ? बोझ
भइयो कि ? भन्ने आशंकालाई कसरी मेट्ने ? जब आफैले शुरु गरेको यात्रामा आघोषित
पूर्णबिराम लगाइन्छ भने, अनि सुचनाहरुको कुनै ओहोरदोहोर नै हुँदैन र प्रयासहरुलाई
मौन कुहिरोहरुले ढाक्छन भने, के बुझ्ने ? प्रश्न धेरै आउँछन, जन्मिन्छन ! जब उत्तरहरुले
यात्रा थाल्दैनन् अनि देखे र भोगे अनुसार एउटा निर्णय त आवश्यक नै हुने रहेछ !
बिगत-बर्तमानले त्यहि भन्यो, त्यहि सिकायो, त्यही देखायो !! Dear,तिमी
कुनै भर हुँदैन, कहिले काहीं भावनामा उर्लिदा, मौका बचाई राख्न, शब्दहरु उर्लिएलान
! केहि सत्य हुन्छन केहि झुठ हुन्छन, केहि
अनयासै निस्किन्छन, केहि लेखाजोखा गरेर निस्किन्छन ! म यिनै परिवेशलाई बुझ्ने
प्रयास गर्दैछु ! भावनालाई थुनेर भन्दा तिनी संग जुधेर म उत्तर
खोज्ने दौडाहमा छु, कुनै दिन आशा छ भेट्टाइन्छ उत्तर ! कहिलेकाहीं म उत्तर खोज्ने
होडबाजीमा फस्न खोज्दिन, यो गन्जागोललाई हुत्ताएर म उम्किन पनि खोज्छु तर फेरी आफै
आउंछु ! संसार गोलो छ, कतै कतै आवेगहरु ठोक्किए भने कुनै नयाँ बिष्फोटनले केहि
नयाँ संदेश ल्याउँछ भन्नेमा आशावादी छु तर अगाडी नै थाक्छु कि भन्ने डर पनि लाग्छ
! एकतर्फी तालीहरुमा आवाज न आउँदो रहेछ, तर खुशी के मा छु भने, मेरा कलमहरु
सजिल्यै थाक्दैनन् ! कतै न कतै मलाई झक्झकाएर पनि लेखिरहन्छन ! लेख्न त तिम्रा कलमहरुले
पनि लेख्लान ! कतै लुक्लान तिम्रा शब्द, केहि सिमित दर्शकहरु माझ ! म मेरो शब्द
राख्न सक्षम छु, मेरा शब्द पढ्न सबै सक्षम छन !! खैर ! लेख्दै गए, पाना भरिंदै जाला ! पाना भर्ने
इक्षा होइन ! शब्दहरुले कहीं कतै वैमनस्यता ओकलेका छैनन् ! न स्वयं लेखकले ! शब्द
गुम्साए गन्हाउँछ, लेखीए, पाठक भेट्टाउँछ, शब्दहरु फिजिन्छन ! यथार्थहरु सतहमा
आउलान ! खोज त त्यहि नै हो जीवनको ! जीवन आफ्नै परिवेश र सौन्दर्यमा चल्छ नै, चलाउनु
पनि पर्छ ! मुस्काउन जीवनले भुल्नु हुँदैन ! मुस्कान छिन्न पनि खोज्नु हुँदैन ! आजलाई मेरो कलमले यहीं बिदा माग्छ !! उही
म !! २०७३/११/०७, शनिबार !
बिमोचन घिमिरे !!
Reactions: Sunday, January 15, 2017
आफ्नै सपनाको भारी बिरानो ठाउँ, मुगलान पारी
बालुवा संग सिङ्गौरी खेल्दै
एकनासको घामसँग आँखा
मृगतृष्णाहरुमा घरका आँगन हाँस्दछन बालखका भरिएका पेट हाँस्दछन हाँस्दछन आङका कपडाहरु ! आमाको बुढो दाँत टलक्क टल्किन्छन पियारिको साडी झलक्क झल्किन्छन घरको छानो केहि माथि उक्लिन्छ बुबाको छाति गर्वले फुल्दछ ति दुई हाल गोरु खेतभरि हिंडेको उ देख्दछ, बाला पहेंला झुलेको !
चिल्लो बाटो घर अगाडी पुगेको नजिकै धारामा पानी बगेको रात, दिन जस्तै भएको !
ऊ देख्दछ आफ्नै पुष्ट शरीर ढल्केको टोपी, नाचेको मन ।
अमिलो पसिनाको स्वादले, मुख रसायो भोको पेट बेस्सरी करायो सिलाएको कमिजको एक फेर, उध्रेछ फेरी तर मुसुक्क मुस्काउँछ चलाउँदै हातपाखुरा, सिध्याउँदै श्रमपसिना एउटा अमुल्य समय जोत्दै छ निरन्तर मृगतृष्णाहरुले धानेको जीवन !
तर भोलीको आशमा, मृगतृष्णाहरुसंग हास्नुछ आज फगत! यथार्थ त अझै पनि रुवाउने नै छ ।।।
२०७३/०६/२७ बिहिबार बिमोचन घिमिरे Posted by
Reactions: Friday, December 16, 2016
फेरिएको छ हाँस्ने-रुवाउने
बिषयहरुको यहाँ सवाल
फेरिएको छ एक्लै
गन्दै बितेका दिनहरुसंगै आज सिङ्गो एउटा साल फेरिएको छ ।
अक्षरहरुको आज बजार
फेरिएको छ भित्तामा
पोतिने रंगहरुको रफ्तार
फेरिएको छ किन
कोरिएका अनेकन कहानीहरु सोध्दा-सोध्दै आफैलाई कारण; आज
सिङ्गो एउटा साल फेरिएको छ । फेरियो
लेखेका अनेकन शब्दहरुको अर्थ फेरियो
आउने-जाने सन्देशहरुको मार्ग हेर्दाहेर्दै
दिनहरु रात हुँदै गए आज, आँखै
एउटा साल फेरिएको छ ।
रङ्गमञ्च?, नाटक कस्तो-कस्तो ?
सम्बन्धहरुको भिडमा, नयाँ स्वाद फेरिएको छ जिन्दगीलाई चिनाउने आज, नाम फेरिएको छ नहुँदा छेक्ने, लोभी तगारो आज
सिङ्गो एउटा साल फेरिएको छ ।
भित्ताहरु तर खबर फेरिएको छ लेख्ने
कलमहरुको यहाँ मसी फेरिएको छ खाली
पानाहरुमा खोज्दा-खोज्दै, हराएका अवशेषहरु सुटुक्क !
उही छ तर मुस्कान फेरिएको छ यात्री
उही छ तर यात्रा फेरिएको छ अनेकन
उत्तरहरुको यहाँ प्रश्न फेरिएको छ नियतिले
दौडाएको कदमहरुमा रुमलिंदै
थुपारेको सन्नाटामा निस्सासिंदा अन्यौलता
सिकाएको पाठ बुझ्न नभ्याउँदै अचम्म
छिटो आज सिङ्गो एउटा साल
फेरिएको छ ।।।
२०७३/०७/२२ सोमबार बिमोचन घिमिरे !!
रातो र चन्द्र सुर्य
युवा पलायन र देश बिकास ~एक बिश्लेशण : सन्दर्भ अन्तराष्ट्रीय युवा दिवस अन्तराष्ट्रीय युवा दिवसको अवसरमा सम्पुर्ण युवा साथीहरुमा नेपाल प्रगतिशील युवा मंचको तर्फबाट शुभकामना । आजको दिनले थन्केर बसेको युव...
फोटो -गुगल शब्द थुपार्ने कुनै सौख होईन । शब्द त एकाएक मनका गहराईबाट ज्वारभाटा उर्ले जसरी...
समय गतिशील छ। यसको भेलमा पसेपछि उम्किन गाह्रो छ । कुन - कति...
कुरा आफ्नै परिवेशको आफ्नै दैनिकीको , हुनत भन्दा म शहरबासी । काठमाण्डौमा घर भएको , यत्ति सुन्दा पनि मेरा सबै साथीहरुको कान ठाडो हुन्थ्यो/...
मेरा दिनहरु ...
पाना पल्टाउँछु अनि टोलाउँछु यादहरु तछाडमछाड गर्दै आउँछन् मानसपटलमा एकसाथ छरिन्छन् म आँखा चिम्लिन्छु दुविधामा पर्छु पाना ? कि या...
©बिमोचन घिमिरे . Travel theme. Powered by Blogger.